स्कुलकी सामान्य शिक्षिका नीता कसरी भइन् अरबपति मुकेश अम्बानीकी श्रीमती ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
स्कुलकी सामान्य शिक्षिका नीता कसरी भइन् अरबपति मुकेश अम्बानीकी श्रीमती ?
कात्तिक ४, २०७६ | आजको अर्थ
एजेन्सी । नीता अम्बानीको जन्म सन् १९६३ नोभम्बर १ मा भएको थियो । नीता दलाल रबिन्द्र दलाल र पुर्णिमा दलालकी सुपत्री हुन् । मुम्बइको सान्टाक्रुजमा उनीहरुको बसाइ रहेको थियो । नीता अम्बानीकी एक बहिनी रहेकी छिन् जो स्कुल टिचर हुन् ।
मुकेश र नीता बारम्बार भेट गर्न थाले । अन्ततः ती भेटहरु प्रेममा परिणत हुन बेर लागेन । मुकेशले आफ्ना मनका भावनाहरु थाम्न सकेनन् । मुम्बईको अत्यन्त व्यस्त स्थलमा मुकेशले नितालाई प्रपोज गरे । निताले आफ्ना भावनाहरु नियन्त्रण गरिन् । तर, उतिखेरै भने उनले प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरिनन् । सन् १९८५ मा मुकेश र नीताको विवाह भयो । विवाह गर्दा निता २२ वर्षकीमात्र थिइन् । विवाह पुर्व टिचर पेशा अपनाइ रहेकी उनले विवाहपछि पनि केही वर्ष पढाउने काम गरिन् ।
यी दम्पत्तिको दुई छोरा र एक छोरी सन्तान रहेका छन् । नीता अम्बानीले आइभिएफ मार्फत दुई जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन् । निता अम्बानीलाई पौडी खेल्न, नाच्न, र आफ्ना सन्तानहरुसँग समय बिताउन एकदमै मनपर्छ ।
नीता अम्बनीको तौल कुनै समय ९० केजीभन्दा बढी थियो । उनले आफ्नो छोरा अनन्तलाई तौल घटाउन ठुलो प्रेरणा दिने काम गरेकी थिइन् ।